musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Wizz Mhepo Kugona Ramp-Kumusoro Inogona Kubereka Chibereko
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hungary Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau
Iine nyika zhinji dzeEurope dzinobvumidza kupinda zvisina kudzivirirwa kune vafambi vakazara, iyo kondinendi yakagadzirirwa kudiwa kwakanyanya sekuvimba kwekufamba kwekufamba kunovaka, izvo zvakanakira ndege yeEuropean centric.
Wizz Mhepo inovavarira kushanda patanho-denda kugona muna Nyamavhuvhu.
Ndege dzemutengo wakaderera dzinoiswa kuti dzive kudiwa.
Wizz Mhepo inogona kunge iri simba reEuropean muzhizha rino.
Kubheja kwaWizz Air pane yeEuropean traffic rebound kunogona kubhadhara mibairo kumutakuri. Ndege dzemutengo wakaderera dzinoiswa kuti dzive kudiwa, uye mutakuri anodhura anodhura anogona kunge ari simba reEuropean muzhizha rino.
Wizz AirMitengo yakaderera ichave iri kudiwa sezvo ichivavarira kushanda patanho- denda kugona muna Nyamavhuvhu. Ongororo ichangobva kuitika yakaratidza kwakasimba-vatakuri nzvimbo yakasimba yekutora chinodikanwa chekupenda-kumusoro, sezvo 52% yevakabvunzwa pasi rese vakapa mutengo / kukosha sechinhu chepamusoro pakusarudza mhando yendege.
Wizz AirMari yakaderera uye yakawanda network ichaita kuti ive yeanonyanya kufadza mashandiro muzhizha rino. Iine nyika zhinji dzeEuropean dzinobvumidza kupinda zvisina kudzivirirwa kune vafambi vakazara, kondinendi yakatemerwa kudiwa kwakakura sekuvimba kwekufamba kwekufamba kunovaka, zvinova zvakanakira ndege yeEuropean centric.
Ongororo ichangoburwa yevatengi (Q2 2021) yakaratidza chete 2% kudonha mune zvevatengi zvinetswa zvemari, ne85% yevanopindura pasirese vachiri 'zvakanyanya', 'zvishoma', kana 'chaizvo' vane hanya nezvenzvimbo yavo yemari, zvichienzaniswa ne87% muongororo yeQ1 2021.
Pakati peH1 2021, vazhinji vafambi 'nzvimbo dzemari dzakaramba dzakachinja. Vafambi vanozonyanya kutsvaga nzira yakachipa yekufamba munguva iripedyo yekuchengetedza mari sezvo mabhajeti achiramba akaomarara. Kudzoka kwakasimba kwaWizz Mhepo kungangoita zvibereko. Nekudzokera padyo-izere chinzvimbo, vafambi vanozopambwa nesarudzo, uye Wizz Mhepo ichava mutakuri anozivikanwa netiweki yakakura iyi chirimo. Vakwikwidzi vazhinji, kusanganisira Alitalia neNorway Air Shuttle, vadzikisa nendege, uye vabuda mumisika, vachisiya mipata iyo inopa Wizz Air mukana wekutanga wekuzivikanwa kwechiratidzo uye kuva mukundi wedenda.